मार्केटिंगमा एआर कत्तिको शक्तिशाली छ भनेर प्रमाणित गर्ने उदाहरणहरू Martech Zone
के तपाईं बस स्टप कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई पर्खेर मनोरन्जन गर्दछ? यसले तपाईंको दिनलाई रमाईलो बनाउँदछ, होइन र? यो दैनिक कामहरु द्वारा लगाएको तनाव बाट तपाईं विचलित हुनेछ। यो तपाईं मुस्कुराउन छ किन ब्रान्डले उनीहरूको उत्पादनहरू प्रमोट गर्ने त्यस्तो रचनात्मक तरिकाहरूका बारे सोच्न सक्दैन? हे प्रतीक्षा; तिनीहरूले पहिले नै गरिसकेका छन्!
पेप्सी ल्याए यस्तो अनुभव २०१ 2014 मा लन्डन यात्रीहरूलाई फिर्ता! बस आश्रयले एलियन्स, युएफओ, र रोबोटहरूको वास्तविक वातावरण लिने मजाको दुनियामा मानिसहरूलाई सुरू गर्‍यो।
यो २०१ 2018 हो, र यो अहिले सम्म मार्केटिंगमा उन्नत वास्तविकताको उत्तम उदाहरणहरू मध्ये एक हो। तर यो एक मात्र होइन। धेरै ब्रान्डहरूले यस प्रविधिमा भरपर्दो प्रचार अभियानहरू सिर्जना गर्न भर परेका छन्।
तपाईंलाई थाहा छ किन एआर ले काम गर्दछ? किनभने यो रमाईलो छ! यसले एक अन्तर्क्रियात्मक अनुभव पनि सक्षम गर्दछ, र यो के मार्केटिंग विज्ञहरू सधैं पछि हुन्छन्। यो पनि एक उत्पादन को एक अधिक यथार्थवादी प्रस्तुति सिर्जना गर्दछ, र त्यो के ग्राहकहरु पछि हुन्छन्।
के तपाई अधिक उदाहरणका लागि तयार हुनुहुन्छ? यहाँ campaigns अभियानहरूको सूची छ जुन एआर मार्केटिंगमा कती शक्तिशाली हुन सक्छ भनेर प्रमाणित गर्दछ:
मुजेजा एक्स-रे अनुप्रयोग
मुजेजा केवल अर्को कपडा कम्पनी हो, अर्को क्याटलग प्रकाशित गर्दै। आईटमहरू राम्रो छन्, तर कसरी तपाईं धेरै खरीददारहरू आकर्षित गर्नुहुन्छ जब तिनीहरूसँग कैटलॉगका साथ बहुविध समान ब्रान्डहरूमा पहुँच छ? - तपाईं सूची विशेष बनाउँछ। यो मोझेजाले २०११ मा गरे। यो केहि समय पहिले हो, तर यो अझै पनि मार्केटिंगमा एआरको अद्भुत प्रयोगको राम्रो उदाहरण हो।
जब सँग जोडी मुजेजा एक्स-रे अनुप्रयोग, प्रयोगकर्ताहरूले क्याटलगको पृष्ठहरू स्क्यान गर्न सक्दछन् र मोडेलहरू कपडा उतार्न सक्दछन्। अचानक, तपाइँको सामान्य क्याटलग अंडरवियर शोमा परिणत भयो।
WWF र मन्डिरी: Rhinos बचत गर्दै
विश्व वन्यजीव कोष र बैंक मन्डिरीको ई-नगदी सेवा के समान छ? दुबै संगठनहरूले गैंडा बचतको ख्याल राख्छन्, त्यसैले तिनीहरू यो अभियानको विकास गर्न सेनामा सामेल भए। जब कार्डधारकहरूले अनुप्रयोग डाउनलोड गरे, तिनीहरू एआर टेक्नोलोजीमा आधारित खेल खेल्न सुरू गर्न सक्दछन्।
यो केवल एउटा निर्दोष खेल मात्र होइन। प्रयोगकर्ताहरूले वास्तवमा जनावरहरूको हेरचाह गर्न सक्थे उनीहरूको इलेक्ट्रोनिक पैसा दान गरेर। सबै अनुदान गैंडा संरक्षण उद्देश्यका लागि निर्देशित थिए।
लोरियल द्वारा YouCam मेकअप
एक वर्ष अघि, ल ओरियल र परफेक्ट कर्पोरेशनले उनीहरूको साझेदारी घोषणा गर्‍यो। परिणाम? - YouCam मेकअप - एक AR सुंदरता अनुप्रयोग जुन व्यक्ति ब्रान्डद्वारा बिभिन्न मेकअप उत्पादनहरूमा प्रयास गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरूले देख्न सक्दछ कि ती उत्पादनहरू उनीहरूको छालाको टोनमा कस्तो देखिन्छ, र तिनीहरूले खरीद गर्नु अघि उनीहरूको बारेमा बढि जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछन्।
यस अनुप्रयोग absolute मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताको साथ एक पूर्ण हिट हो Android र मा 26K भन्दा बढि रेटिंग्स App स्टोर... र हामी जान्दछौं कि अनुप्रयोगहरू मूल्या rate्कन गर्नका लागि मानिसहरूलाई कती गाह्रो हुन्छ। यो तपाईको सामान्य मेकअप अनुप्रयोग होईन। यो वास्तवमै परिष्कृत छ र परिणामहरू यथार्थपरक छन् जस्तो उनीहरूले पाउँछन्।
Sayduck फर्नीचर भिजुअलाइजर
IKEA को एआर सूची यो देखापर्ने क्षणबाट नै ठूलो हिट भयो, तर के तपाईंलाई बजारमा यो प्रकारको एकल अनुप्रयोग उपलब्ध थिएन भनेर थाहा छ? Sayduck अझ राम्रो छ, किनकि यसले तपाईलाई एकल निर्मातामा सीमित गर्दैन।
अनुप्रयोगले तपाईंलाई एक धेरै साधारण, तर प्रभावशाली सुविधा दिन्छ: तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि कसरी फरक फरक प्रकारको फर्नीचर तपाईंको घरमा फिट हुन्छ। तपाईं त्यो कुख्यात एम्स लाउञ्ज कुर्सी चाहानुहुन्छ तर तपाईंलाई आफ्नो स्थानमा कस्तो देखिन्छ भनेर थाहा छैन? तपाईलाई थाहा छैन कि ओटोम्यानलाई पनि प्राप्त गर्ने हो कि? अनुप्रयोग निश्चित रूपमा निर्णय संग मद्दत गर्दछ।
तपाईं सोचमा परिरहनु भएको हुन सक्छ: यसले मार्केटिंगसँग के गर्नुपर्दछ? ठीक छ, सायड्याक अग्रणी डिजाइन ब्रान्डसँग सहकार्य गर्दछ, जसले उनीहरूका ग्राहकहरूलाई खरीदमा बढी विश्वस्त बनाउन चाहान्छन्। त्यो जहाँ ब्यापार पक्ष मा लात छ।
विद्यार्थीहरूको लागि नयाँ लुकको एआर रिटेल अभियान
युएईमा उनीहरूको कपडा लाईन अझ लोकप्रिय बनाउन, नयाँ लुकले उनीहरूको विद्यार्थी कार्डको साथ जान मजेदार एआर अभियान शुरू गर्यो। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो हस्ताक्षर रूप फेला पार्न उत्पादनहरू मिलाउन र मिलाउन सक्षम गर्दछ, तर तिनीहरू थप सामग्री र विशेष प्रस्तावहरू पहुँच गर्न सक्दछन्।
मध्य पूर्वमा यो पहिलो संवर्धित वास्तविकता अभियान थियो, र यो नै यस्तै राम्रो स्वागत गरियो। अधिक संग प्रति महिना १०K अन्तर्क्रिया र औसत सगाई को लगभग सात मिनेट, यो निश्चित रूप मा लक्षित दर्शकहरु बीच ब्रान्ड जागरूकता बढ़ावा।
डिज्नीको एआर रंग पुस्तक
डिज्नी एआर प्रयोग गर्न सुरु भयो २०१ 2015 मा रंगीन पुस्तकहरू फेरि जीवनमा ल्याउन, तर कम्पनीले त्यो अभियानलाई सुधार गरिरहेछ।
रंग पुस्तकहरू सधैं रमाईलो छ, तर तिनीहरू अब स्थिर छैन। जब बच्चाहरू एआर अनुप्रयोग मार्फत मोडेलहरू देख्छन्, तिनीहरूले नयाँ आयामहरू प्राप्त गर्दछन्। यो टेक्नोलोजीको एक धेरै साधारण अनुप्रयोग हो जुन अझै सम्भावित टनहरू अनलक गर्दछ।
पिज्जा हटको एआर मेनू
संवर्धित वास्तविकता यति बहुमुखी छ कि यसले सबै प्रकारका उद्योगहरूमा यसको कार्यान्वयन भेट्टाउन सक्छ। रेस्टुरेन्ट चेनहरू यसको अपवाद हुँदैनन्। पिज्जा हटले एआर टेक्नोलोजी मार्फत यसको मेनू सुधार गर्ने एक धेरै रचनात्मक तरीका फेला पार्‍यो।
अनुप्रयोग ईन्जिन क्रिएटिभ द्वारा विकसित गरिएको थियो; हामीले उही माथि नयाँ लुक अनुप्रयोगमा काम गर्ने उही एजेन्सी।
यस पटक, टोलीले ट्रिभिया चुनौतीको विकास गर्‍यो जसले पिज्जा हटको मेनू मार्गलाई रमाईलो बनायो। प्रयोगकर्ताहरूले केवल एक ट्रिगर छवि स्क्यान गर्न ओगल अनुप्रयोग प्रयोग गरे। यसले उनीहरूलाई ट्रिभिया चुनौती खेल र पारिवारिक दिन बाहिर जित्ने अवसरमा पुर्‍यायो। अनुप्रयोगले तिनीहरूलाई मेनुको माध्यमबाट ब्राउज गर्न र प्रत्यक्ष अर्डर राख्न सक्षम गर्दछ। भोजनको थ्रीडी प्रस्तुतीकरणले तपाईंलाई हान्गीयर बनाउँछ।
हामी अझै एआरको वास्तविक मार्केटिंग पावर अन्वेषण गर्न को लागी छौं
यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि मार्केटिंगमा उन्नत वास्तविकताको सफल कार्यान्वयनले कसरी ठूलो नतिजा प्राप्त गर्न सक्छ। तर के यो हामीले हेर्ने क्रममा सबैभन्दा उत्तम हो? पक्कै पनि होइन! यस प्रविधिले अवसरहरूको विश्व खोल्दछ। हामीले यसलाई अझ बढी पत्ता लगाउन र नयाँ विचारहरूको बारेमा सोच्न आवश्यक छ जुन हाम्रो दर्शकहरूलाई संलग्न गराउँदछ।
तपाईंसँग पहिले नै दिमागमा केही अवधारणाहरू छन्, हैन? तपाईंको विचारहरूको नोट राख्नुहोस्; उनीहरूले तपाईंलाई सबैभन्दा भयानक प्रमोशनल अभियानमा नेतृत्व गर्न सक्दछन्!
टैग: arएआर उदाहरणहरुएआर कार्यान्वयनaugmented वास्तविकताडिज्नी एआरउदाहरणहरूलोरियलहेर्नुएआर हेर्नुहोस्पिज्जा हटपिज्जा हट हटsayduck फर्नीचर भर्चुअलाइजरWWFYouCam